Tenisy – Afrika U14: nanilika an’i Namibia ny ekipa malagasy zazalahy | NewsMada
Tenisy – Afrika U14: nanilika an’i Namibia ny ekipa malagasy zazalahy
Par Taratra sur 17/01/2020
Tsara ny vokatra azon’ny ekipa malagasy, omaly, ho an’ny sokajy zazalahy, ao anatin’ilay fiadiana ny tompondakan’i Afrika Aostraly U14, tanterahina any Namibia. Nailiky ny Malagasy tamin’ny seta 3 no ho 0 ny ekipan’i Namibia.
Mitohy hatrany ny fifaninanana andraisan’i Madagasikara anjara any Namibia, ho an’ny taranja tenisy. Nahazo vokatra tsara ny sokajy zazalahy ho antsika, teo amin’ny fifaninanana isam-bondrona ary efa tafakatra sahady eo amin’ny manasa-dalana. Seta 3 no ho 0 (6/1 6/3-6/1 6/0-6/2 6/1) no nandavoan-dry Tefy Ranja sy ry Tody Avo ary Mahefa, ny ekipan’i Namibia mpampiantrano, omaly, tao Windhoek Namibia. Ankoatra ny nahazoan’izy ireo ny tapakila ho amin’ny manasa-dalana, hiady ny toerana voalohany ao anatin’ny vondrona A ihany koa ireto solontenantsika lehilahy ireto anio, ka ny ekipan’i Zimbaboe no hifanehatra amintsika mandritra izany. Etsy ankilany, ry zareo Afrika Atsimo sy i Botsoana kosa no hiady izay toerana voalohany izay, ao amin’ny vondrona B.
Teo amin’ny sokajy vehivavy kosa, tsy nahomby ny ekipa malagasy, omaly, satria resin’i Afrika Atsimo tamin’ny seta 3 no ho 0 (1/6 0/6-2/6 1/6-6/4 5/7 5/10), ry Harena sy i Miotisoa ary i Ravaka, teo amin’ny fifaninanana isam-bondrona hatrany. Mbola hiatrika ny ekipan’i Botsoana anefa izy ireo ho amin’ny anio ary vonona ny hitady fandresena.